Chitima chepamusoro chevashanyi chakananga kumucheto kweAfrica
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Dzakanaka » Chitima chepamusoro chevashanyi chakananga kumucheto kweAfrica
Botswana Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Nhau Dzakanaka • South Africa Breaking News • Tanzania Breaking News • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Zambia Breaking News • Zimbabwe Breaking News
Inonyanya kuzivikanwa seKudada kweAfrica, iyo Rovos Rail yekushanyirana chitima yakasiya guta rekutengesa reTanzania reDar es Salaam kuenda kuCape Town pakati pezuva neChipiri, ichipfuura nekushamisa kweTanzania neZambia Njanji njanji kuenda kuCape Town kumucheto kwekondinendi yeAfrica.
Chitima, Pride of Africa, yakasiya guta guru reTanzania na12 pm, ichitenderera kuCape Town, ichidimbura Tanzania, Zambia, Zimbabwe, neBotswana isati yabata South Africa.
Mushure mekubva kuDar es Salaam, chitima chakange chapfuura neSelous Game Reserve, paki yakakura kwazvo inochengetwa uye ine mhuka dzesango muAfrica inosvika nzvimbo yemakiromita makumi mashanu nemashanu.
Kwemaawa mashoma, vashanyi vari muchitima vanogona kuona mhuka dzesango kuburikidza neyekutarisa-girazi-rakagadzirwa murairidzi rakagadzirirwa kuona nzvimbo apo chitima chiri kufamba.
Udzungwa Ranges uye African Great Rift Valley ndizvo zvimwe zvekushanya zvinokwevera vafambi vezvitima kuti vatore maonero. Chitima chinopfuura pamusoro peChisimba Falls muZambia uko vafambi vanowana mukana wekuona mapopoma akanaka.
Tichisvika paLivingstone, chitima chobva chayambuka bhiriji ndokusvika pamuganhu weZimbabwe kushanya kukuru paVictoria Falls isingaenzaniswi nerwendo rwezuva parwizi rweZambezi uye rwendo rwekufamba kubva kumahombekombe erwizi kuenda kuhotera.
Nguva yekuzorora kuVictoria Falls inosanganisira zviitiko zvakadai sekushanya kwemapopoma makuru, helikopta pamusoro pemapopoma, safari yenzou-yekumashure, kufamba neshumba, kuchena mvura rafting, kusvetuka kwebungee, uye gorufu.
Vashanyi vari muchitima, mushure mekubva kuVictoria Falls, vanowanawo mukana wekushanyira Hwange National Park vasati vaenda kuBulawayo, guta rechipiri pakukura muZimbabwe.
KuBotswana, chitima chinoenda kumaodzanyemba kuburikidza neFrancistown neSerule, chinoyambuka Tropic yeKapricorn uye ichienderera mberi nekuMahalapye kuenda kuGaborone uko vashanyi vanoburuka vachishanyira kuMadikwe Reserve nekugara husiku huviri pane imwe lodge. Mangwanani-ngwanani mutambo wekutyaira, masikati mutambo wekutyaira, uye zvimwe zviitiko zvevaenzi zvinoratidza zuva revashanyi veRovos Rail.
Kubva kuMadikwe Reserve neMagaliesberg Mountains, vashanyi vanotora mutambo wemangwanani chitima chisati chanyudza nzira yavo, vachidarika kuMakomo eMagaliesberg, makomo akadzika akatambanuka makiromita zana nemakumi maviri kumabvazuva-kumadokero kubva kuPretoria kuenda kuRustenberg muSouth Africa.
Kimberley Big Hole uye iyo Diamond Mine Museum ndiyo nzvimbo inogadzirwa nevashanyi inokwezva vashanyi vanokwira chitima cheRovos Rail pakushanya. Kubva kuKimberly, chitima chinoenda kuBeaufort West kozoti Matjiesfontein, musha une nhoroondo unokodzera kushanya kwevashanyi.
Chitima chinoenda kuCape Town kuburikidza neTouws River neWorcester kwekumira kwayo kwekupedzisira mushure mekucheka hafu yekondinendi yeAfrica muzuva remazuva gumi neshanu, rwendo rwevintage rwehafu yekondinendi yeAfrica kuzadzisa "Kurota kwaCecil Rhodes" - njanji kubva iyo Cape kusvika Cairo.
Chitima cheRovos Rail chepamusoro chinotevera nzira dzaCecil Rhodes dzinobva kuCape, dzichidarika neSouthern Africa kuenda kuDar es Salaam uye dzinobatanidza vatakuri vayo kune dzimwe nzvimbo dzeAfrica kuburikidza nehumwe njanji network muEast Africa.
Yechinyakare, Edwardian Rovos Rail chitima chinotenderera iine makochi 21 emapango ane simba rekugashira 72 vafambi. Iwo makochi ekare emapuranga ane makore ari pakati pemakumi manomwe kusvika zana emakore, uye akavezwa mumotokari dzinokodzera vanofamba.
Yakagadzwa neRovos Rail Company, chitima chevintage chakaita rwendo rwayo rwekutanga kuenda kuDar es Salaam muna Chikunguru 1993 kunopedzisa kurota kwaCecil Rhodes kwekuisa njanji kubva kuCape Town kuSouth Africa kuenda kuCairo kuEgypt, ichipfuura nepasi penyika yeAfrica kubva ku Maodzanyemba ekumaodzanyemba kumucheto kuchamhembe kwekondinendi iyi.
Yavuze ku kigo cya Afurika cya Afurika (ATA) cya Leta Zunze Ubumwe z'Uburasirazuba mu Rwanda mu gihe gishize, Rovos Rail igihugu gishinzwe gishinzwe kandi kigera kuri tariki ya XNUMX Nyakanga Rovos Rail inomira semumwe wevanotungamira makwikwi ekukura kwekushanya kweAfrica.
Mukubatana pamwe neRwanda Development Board, 41st ATA Congress yakagadzirirwa kuratidza mashandisiro ekuti kushanya kungashandiswa seinjini yekukudziridza hupfumi nekugadzirwa kwemabasa kuburikidza nehunyanzvi hwemabhizimusi, hunyanzvi hutsva, uye kudyidzana kwehunyanzvi.
Kunze kwekunge ndege dzendege dzinoratidzwa panguva yeATTA Congress, Rovos Rail ndiyo imwe shamwari nyowani yekushanya inofanirwa kukurukurwa panguva yeCongress, yakanangana nekusimudzira nzvimbo yekushanya muAfrica pasirese.